Naxariis La’aanta Al-shabaab! |
Dhaqanka, Afka Hooyo, Taariikhda Soomaaliya & DuniddaMaqal & Muuqaal Arrimaha BulshadaSiyaasadda & Xalinta Khilafaadka
Naxariis La’aanta Al-shabaab!
Cabdijabaar Sh. Axmed — October 14, 2015
Ficilida foosha xun ee ay kulla kacaan shacabka waxa ka mid ah wax aan horre loo arag oo naxdin leh. Iyagoo leh waxanu raacaynaa shareecada Islaamka, ayey haddana ku dhaqmaan sunnihii Fircoon kulla dhaqmi jiray reer bani Israel, kuwaas oo ahaa ciqaabo xun-xun iyo naxariis la’aan. Fircoon wuxuu ahaa kii dadka ugu hanjabi jiray inuu ka jaraayo lug iyo gacan isdhaaf ah.
Haddaba, iyagoo ka shidaal qaadanaya Fircoon waxay Alshabaab sannadkii 2009, ka fuliyeen magalaada Muqdisho xukunkii ugu naxariista darnaa. Taas oo aheyd, iyagoo shan ciyaal ah ka dhigay curyaamo maalin keliya. Maxay ku kasbadeen dhalinyaradaasi ciqaabtaas? Muxuu ahaa denbiga jideeyey in xukunkaas lagu fuliyo masaakiintaas? Maxayse diinta Islamku ka qabtaa ciqaabta noocan oo kalle? Marka aan eegno Quraanka Kariimka ah, waxaa ku yaal 4 Aayadood oo ka hadlaaya lug iyo gacan isdhaaf ah oo la gooyo. Saddex aayadood waxay ka hadlayaan Fircoon markuu u hanjabaayey saaxiriintii Nebi Muuse rumeeyey. Hal aayadna waa Almaa’ida, Ayada 33. Waxayna Leedahay “Ciqaabta kuwa la dagaalama Allah iyo Rasuulkiisa, dhulkana fasahaad ku faafiya waa:
1. in la dilaa.
2. ama daldalid (Crucifixion).
3. Ama Lugahooda iyo gacmahooda oo isdhaaf loo gooyo.
4. Ama dhulka oo laga mustaafuriyo.
Aayadani Afartaas ciqaaboodba waa ku yaaliin. Laakiin Alshabaab waxay adeegsatay ciqaabtii ugu naxariista darneyd. Sababtoo ah, lug iyo gacan lagu jaraa waa ka xuntahay geerida. Ma shaqaysan kartid, ma socon kartid, mana istaagi kartid. Waxaana kasii daran dhibaatada mustaqbalka curyaamadani u keeni doonaan dawlad iyo Mujtamacaba. Dadkaa lugaha iyo gacmaha la gooyey waxay ku tiirsanaan doono shacabka Somaaliyeed dhammaantood. Waa in loo sameeyo meelo gaar ah oo lagu xanaaneeyo curyaamiinta illaa inta ay ka dhimanayaan.
Dhaqaalaha ku bixi doona xanaaneyntooda ayaaban la qiyaasi karin. Haddii dhalinyaradaas yihiin danbiilayaal, denbigey galeen wax kastaba ha ahaadee waxaa loo adeegsan lahaa Quraanka Kariinka ah iyo Shareecada islaamka, ciqaabtaas laguma qaadeen. Xabis ayey ahaan laheyd ciqaabta ugu adag ee waajibka aheyd in lagu qaado. Waa haddii ay denbiba galeen. Xuduudka Keenya ama Itoobiya kusoo daadi ama meelo kaleba u tarxiil. Taasi baa u dhaami laheyd carruurtaas maanta curyaamada noqday.
Waxase ugu sii darneyd, markii ay gacmihii iyo luguhii la gooyey, laga soo raariciyey alwaaxyo dhaadheer. Shacabkiina yar iyo weyn, carruur iyo ciroole, daawadeen dufatooyin iyo haad gacmo bani aadam cuneysa! “waxaad u moodaa in meesha lagu jalaayay filim horror ah” Waxay isleeyihiin shacabka ku cabsi geliya, laakiin ma arkaan inay taasi keenayso shacabkii oo naxariistii ilaawaba iyo carruurtii oo arka xubno bani adam oo la gooyaa inaaney qiimo lahaan iyo in laga soo laa-laadin karo tabeelooyin oo haadku quuto. Waxyaabaha keenay in dhalinyarada intooda badan ay iskeega tagaan wadanka gudihiisa madamaa ay jiraan dad sidaan u dhaqmaayo.
Waxaa la hubaa in dhalinyarada Soomaaliyeed meelkasta ay joogaan aysan haysanin farxad ku filan maxaa yeelay haddii dadkaada ay gaajoonayaan adigana aad dheragsantahay waxay kuu tareyso malahan dharegtaas, waxaa kaaga fiican inaad iyaga la gaajooto. Waxaa lawada ogyahay in wadama ay u tahriibaan Soomaalida inta badan ay dhibaato badan kalla kulmaan wadankaas dadkiisa iyagoo aan ixtiraam loohaynin wadanka ay ka dhasheen Soomaaliya. Wadamadaan ayaa kamid ah sidda Yaman iyo Koonfur Afrika oo inta badan qofka nolosha ay ku gubaan dad noo-nool. Soomaalida joogta Yaman oo aad loo bahdilo. Soomaalida ku sugan Yaman ayaa waxaa dhacdo in mar-marka qaar la iska xerto iyagoo la rabo in lacag laaluush lagu soo deeyo.
Next post QISO CAJIIB AH: Ka Tusaalle Qaado Qisadii Malik Ibn Dinar
Previous post Maansada, Sanad wacan!